विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षा | शरणार्थी केन्द्र अनलाइन | शरणार्थी केन्द्र अनलाइन
कलेज लागि आवेदन धेरै महिना गरिन पहिलो दिन अघि छ. तपाईं स्कूल कस्तो तपाईं जानुहोस् र भेला र समय कागजी कार्रवाई पेश गर्न चाहनुहुन्छ निर्णय गर्नुपर्छ थप पढ्नुहोस्
एक छात्रवृत्ति तपाईं कलेज लागि तिर्ने मद्दत चाहिएमा लागू गर्न सक्ने पैसा दान छ. newcomers लागि विशेष हुन् भनेर छात्रवृत्ति बारेमा जान्न थप पढ्नुहोस्
कलेज अमेरिका मा धेरै महंगा हुन सक्छ. धेरै मानिसहरू भनिन्छ छात्रवृत्ति वा सरकार सहायता दान रकम लागि लागू. अरूलाई पनि भाग-समय काम गर्न छनौट थप पढ्नुहोस्
तपाईं संयुक्त राज्य अमेरिका मा स्कूल सुरु गर्न चाहनुहुन्छ भने, के तपाईं आफ्नो घर देशमा के शिक्षा पायो देखाउन आवश्यक हुनेछ. हाकिमहरूले आफ्नो शिक्षाको बारेमा सोध्न सक्छ, धेरै. तपाईं आफ्नो विदेशी प्रतिलिपिहरु मूल्यांकन गर्न आवश्यक हुनेछ. तर तपाईंले आफ्नो घर देश मा एक डिग्री वा प्रमाणपत्र छ भने पनि, तपाईं आफ्नो पुरानो काम मा काम गर्न थप कक्षाहरू वा परीक्षण लिन आवश्यक हुन सक्छ। थप पढ्नुहोस्
तपाईं आफ्नो शिक्षा पूरा गर्न चाहनुहुन्छ? नयाँ काम को लागि तालिम वा आफ्नो कौशल सुधार? विश्वविद्यालय जाने वा अंग्रेजी सिक्न? तपाईं अनलाइन वा आफ्नो समुदायमा एउटा वयस्क शिक्षा प्राप्त गर्न सक्छन् कसरी पत्ता लगाउनुहोस्। थप पढ्नुहोस्
कलेज अफ बच्चा पठाउने
कलेज अफ बच्चा पठाउन धेरै रोमाञ्चक छ. कसरी तयार र यो ठूलो परिवर्तन मार्फत आफ्नो बच्चा मदत गर्न सिक्नुहोस्। थप पढ्नुहोस्
कलेज जाँदै: एक कलेज स्नातक एक शरणार्थी मेरो यात्राकोकलेज जाँदै: हसन, सोमालिया देखि शरणार्थी, अन्य शरणार्थी सफल मदत गर्न सल्लाह संयुक्त राज्य अमेरिका मा कलेज गएर र प्रदान गर्दछ आफ्नो अनुभव बारे लेख्छन्।
जो कोहीले ड्रिम सक्दैन र सबै सम्भव छअमेरिकी सपनाको शरणार्थी संस्करण. शरणार्थी बोध गर्न आए कसरी जो कोहीले सपना र सबै सम्भव छ गर्न सक्ने एक कहानी।
5 तपाईं अमेरिकी विद्यालयमा सफल सहायता गर्न कारक5 तपाईं अमेरिकी विद्यालयमा सफल सहायता गर्न कारक. नयाँ अमेरिकी रूपमा, तपाईं स्वतन्त्रताको सपना, शिक्षा, अनन्त अवसर, र सफलता।